रोकिएन नेपालको विकेट पतन, पवन पनि शून्यमै आउट ! - Everest Dainik - News from Nepal
रोकिएन नेपालको विकेट पतन, पवन पनि शून्यमै आउट !
काठमाडौंः प्रथम श्रेणी क्रिकेटमा मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ले दिएको ३९३ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आज पनि नेपालले सस्तैमा ७ विकेट गुमाएको छ ।
नेपालले सातौं विकेटका रुपमा पवन सरार्फलाई शून्यमै गुमाएको हो । यसअघि नेपालले आरिफ शेखलाई १९, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारीलाई शून्य, ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ६, शरद भेषवाकरलाई १५, राजु रिजाललाई ३१ रनमा गुमाइसकेको छ ।
याे पनि पढ्नुस एमसीसीलाई पहिलो झड्का, सोमपालले लिए विकेट (स्कोरबोर्डसहित)
ट्याग्स: प्रथम श्रेणी क्रिकेट